Buuq iyo Sawaxan ka Dhashay Markii Boodh Lagu Xardhay sadaam Xuseen Laga Taaagya wado Ku taal London | Biyoguurenews.com
Home Faallooyin Buuq iyo Sawaxan ka Dhashay Markii Boodh Lagu Xardhay sadaam Xuseen Laga...
Buuq iyo Sawaxan ka Dhashay Markii Boodh Lagu Xardhay sadaam Xuseen Laga Taaagya wado Ku taal London
Qoraalkaas xuska ah oo ku xardhan bir naxaas ah ayaa laga taagay mid ka mid ah wadooyinka ugu mashquulka badan ee xaafadda Winstead ee duleedka London. Waana “qoraal lagu muujinayo kalgacal loo qabo Sadaam Xuseen” kaas oo lagu muujiyey taariikhdii uu dhashay ee 1937 iyo taariikhdii la dilay ee 2006.
Qoraalkaa xuska ah ee halkaa laga taagay ee lagu muunaynayo keligii taliyihii hore ee Ciraaq waxa uu ka cadhaysiiyey dad badan oo ka mid ah kuwa xaafadaa degan.
Wargeyska The Independent ayaa soo xigtay haweenay 38 jir ah oo halkaa ku nool in ay tidhi “run ahaantii aad baan u argagaxay. Hooyaday oo na soo booqatay baan la socday markaas uun baan isha ku dhuftay qoraalkaas, run ahaantii aad baan u dhibsaday, waxaanan isku dayey bal inaan hubsado in waxaan arkayaa dhab yahay iyo in kale”.Waxaanay hadalka ku dartay “waxaan is idhi malaha maaha waxaad mooday laakiin waxa aan aad uga cadhooday waa markaan hubsaday inuu yahay xaqiiq. Waxaan aaminsanahay in noloshii qof waxaas oo dhibaato ah baday dadka kalgacal loo muujiyaa in ay tahay arin fool xun. Hadii se ay maadaysi tahay xataa maaha wax lagu qosli karo”.
Wargeyska The Sun ayaa isaguna af-hayeen u hadlay degmada Redbridge ka soo xigatay in uu yidhi “cidna ruqsad umaanu siinin in ay qoraalkaa taagaan, imikana waaba la fujiyey”.
Sadaam Xuseen oo Ciraaq xukumayey in ka badan 30 sanadood waxa xukunka laga tuuray markii Maraykanku ku duulay dalkaas sanadkii 2003.
Waxaana la dilay 2006 ka dib markii maamulka Ciraaq ku helay in uu geystay “dambiyo aadamaha laga galay”.
Ilaa haatan lama oga in qoraalkaa goobta laga taagay ahaa mid loogu talo galay in dadka lagaga qosliyo iyo in ay ahayd mid uu si badheedha u taagay qof ka mid ah dadkii jeclaa madaxweynihii hore ee Ciraaq.
Previous articleSafiirka Somaliland U Fadhiya Jabuuti Gaadhi Buu Dalka Kala Baxsadey , Mana Geyo Xil Loo Magacaabo ..” Xisbiga UCID + [ Muuqaal
Next articleBoqorka Sucuudiga oo Jeediyay Qudbadiisii sanadlaha Ahayd ,Mase Kahdlay